केहि दिन आगाडी ट्रेलर सार्बजनिक गरेका प्रचण्डले फेरी खोले मुख, ओलीलाई झड्का !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
केहि दिन आगाडी ट्रेलर सार्बजनिक गरेका प्रचण्डले फेरी खोले मुख, ओलीलाई झड्का !
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक छलाङ अचम्मको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धदेखि अहिलेसम्मको उनको उतारचढावलाई हेर्दा लाग्छ कि उनको छलाङ चानचुने छैन। उनी दुई पटक त प्रधानमन्त्री नै भए। हुनत उनलाई हेर्ने नजरहरु फरक फरक छन् । कोही उनलाई अस्थिर भन्छन् त कोही चतुर राजनीतिक खेलाडी भन्छन्।
आज प्रचण्डले फेरी सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुने बताएका छन् । चितवन पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “सबै कुरा थाहा पाउनुभएकै छ । सहमतिअनुरूप हुन्छ । पटकपटक मेरो मुखबाट किन बोल्न लगाउनुहुन्छ ?” उता बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उतै पार्टी एकताका क्रममा भएको सहमतिको रहश्यबारे बोलेका थिए ।
‘हामीले पार्टी एकताअघि सहमति गरेका हौं । पार्टी एकता भइसकेको छ । अब के गर्दा ठीक हुन्छ, त्यसको टुंगो पार्टीले नै लगाउँछ,’ प्रधानमन्त्रीले बेलायतको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अक्सफोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा भने ।
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सरकारको कार्यशैलीबारे छलफल भएपनि आलोपालो वा के गर्ने भन्ने विषय नउठेको बताएका थिए ।